🥇 ▷ Galaxy Note 10 wali lama shaacin laakiin hore ayuu u leeyahay cusbooneysiin! ✅
Galaxy Note 10 wali lama shaacin laakiin hore ayuu u leeyahay cusbooneysiin!
25 Labada Galaxy Note 10 iyo 10+ labaduba waxay ku dhufan doonaan dukaamada bisha Ogosto 23. Hase yeeshee, kahor, Samsung waxay cusbooneysiineysaa dushooda kor u qaadis dhowr ah oo horumarineed kuwaas oo ka dhigi doona aaladdaan xitaa ka sii raaxaysi badan. Cusboonaysiinta ay aqoonsatay shirkadda SamMobile ayaa hadda gaadhaysa qaar ka mid ah suuqyada Yurub iyo Hindiya. Isla waqtigaas waxaan ku helnay qalabka aan tijaabinayno. Si kale haddii loo dhigo, Galaxy Note 10 wali suuqa kuma dhicin laakiin durba waxay leedahay cusbooneysiin!
Marka laga hadlayo isbeddelada, nooca N97 * FXXU1ASH5 firmware nooca ayaa hagaajiya dhinacyo badan. Tusaale ahaan, ku-habboonaynta qalabka sawirka faraha, waxqabadka shaashadda taabashada, xasilloonida kamaradda, iyo tayada muuqaalka.
Intaa waxaa sii dheer, cusboonaysiinta waxaa ku jira patch Security Ogosto.
Kani waa cusboonaysiinta ugu dambaysa ee amniga ee ay soo saartay Google. Cusboonaysiinta ayaa culeyskeedu yahay 310MB. Taasi waa, maahan mid aad u weyn, laakiin way fiicantahay in la arko Samsung oo horumarinaysa aaladaha kahor intaysan xitaa garaacin dukaamada.
Haddii aad horay u sii ballansatay mid ka mid ah aaladda Samsung, hubi cusboonaysiinta cusub isla marka aad shiddo.
Ma waxaad dooneysaa inaad la wareegto iibsashada Qoraalka 10? Maalmo yar baa ka hadhay!
Samsung ayaa daaha ka qaaday khadkeedii ugu dambeeyay ee ‘Premium’ Note, laakiin markan Waxaan soo dhoweynay laba moodel intii aan ahaan lahayn kaliyamid, note 10 iyo note 10+.
Si kastaba ha noqotee, tani kaliya maahan beddelin, maaddaama shirkadda weyn ee Kuuriyada Koonfureed ay go’aansatay inay qalabkeeda casriga ah ku qalabeyso qalab waxyar ka duwan kuwii aan fursad u helnay oo aan ku heli karno tirada loo yaqaan ‘Galaxy S10’ bishii Febraayo.
Samsung S10-ka Samsung wuxuu horey u ahaa fikirkayaga Android inuu lahaado, hadii aad rabto inaad heysato suuqa ugu fiican waa inaad bixiso… Laakiin noteka cusub ayaa kor uqaadaya barkaan xitaa ka sareeya
Akhriso Gacan-Yartaada, oo leh aragtiyaha koowaad ee ku saabsan Galaxy Note 10+:
Hagaag, sida Samsung ay ogtahay inay tartan la gali doonto Apple (iPhone 11) iyo Huawei (Mate 30 Pro) toddobaadyada soo socda.
Shirkadda ayaa go aansatay inay bilawdo olole dib ula soo laabasho ah, halkaas oo ay kuusoo bandhigi doonto qiimo dhimis dhan 500 € haddii aad ku wareejiso taleefankaaga casriga ah waqtiga iibsashada. (Lacagta waxay kuxirantahay aaladda aad keentid)
Sidaas darteed, deeqdani waxay ku xaddidan tahay xilligii amar-bixinta… oo dhammaata Ogosto 22! (Halkan kuxiir)
Haddii aad ka hesho mid ka mid ah 4 bakhaar oo horay-u-fiirinta iyo amar-horay ah mid ka mid ah, 10-kii macaamiil ee ugu horreeyay waxay heli doonaan filim difaac ah Xusuusin 10. Kaliya illaa 22ka Ogosto.